ny sabotsy lasa teo ny Fikambanana mpanao asa soa sampana sosialy Fanantenana FAFI-5. Ny solombavambahoakan’ny boriborintany faha-5 Naivo Raholdina niaraka tamin’ny sampana sosialy Fanantenana FAFI-5 izay notarihan-dRamatoa Hanitriniala Raholdina vadiny no nanatanteraka ny asa. Tsy manadino ny vahoaka sahirana eny an-toerana ny Solombavambahoaka araka ny nambarany ka na misy traboina na tsy misy ary raha sendra ny loza tampoka toy izao dia tsy maintsy manampy ny sahirana foana ny tenany. Nohamafisiny ihany koa fa tsy tokony hidirana resaka politika intsony ny fanampiana toy izao fa na misy fifidianana na tsy misy dia tokony hatao foana izany ho an’ny mpiara-belona. Nanentana ny rehetra tsy ankanavaka ihany koa izy mba hanampy ireo traboina may trano ireo. Tsiahivina fa 13 ny trano hazo may kila tanteraka ary nisy 7 ny trano biriky manodidina azy izay may ihany koa. Fianakaviana 30 mahery no tsy manan-kialofana izay notoloran’ny sampana sosialy Fanantenana FAFI-5 ireo fanampiana. Nanentana ny rehetra moa ny Depiote Naivo Raholdina mba hitandrina ary hanara-maso hatrany ny ankizy sy ny afo rehetra any an-trano mba hisorohana ny loza toy izao satria araka ny fitantaran’ny mponina teny an-toerana dia ankizy nanao “tsikoninkonina” no niandohan’ny afo. Nisaotra sy nankasitraka ny fanampiana ireo traboina na dia tao anatin’ny fahasahiranana tanteraka aza.